Maxaa Xigi Doona Doorashada Guddoonka Baarlamaanka? - iftineducation.com
Maxaa Xigi Doona Doorashada Guddoonka Baarlamaanka?
aadan21 / August 29, 2012
iftineducation.com – Kadib doorashadii shalay ee Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa xigi doona kulan ay Baarlamaanku yeelan doonaan maalinta Khamiista ee berri.
Guddoomiyaha Baarlamaanka cusub Proff. Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in maanta ay nasan doonaan mudanayaasha Baarlamaanka maadaama ay shalay oo dhan u taagnaayeen doorashada.
Proff. Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa sheegay in maanta saddexda masuul ee Baarlamaanka ugu saraysa ay qorsheyn doonaan qaabka ay u socon doonaan kulamada soo socda.
Kulanka ay yeelanaayana mudanayaasha maalinta Khamiista ayaa waxaa lagu qorsheyn doonaa qaabka ay u dhacayso doorashada Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo la qorsheeyey in ay dhacdo 5-ta bisha soo socota ee September.
Markii lasoo gaba gabeeyey lagana soo gudbay doorashadii guddoonka Baarlamaanka ayaa arrinta indhaha lagu wada hayo ee hartay waxa ay tahay doorashada Madaxweynaha oo la aaminsan yahay in ay ka xamaasad ka badan tahay tii guddoonka Baarlamaanka.
Gudoonka Baarlamaanka oo hada la dhaariyay iyo Mahdi C/dulle Cawad oo ku guuleestay Gudoomiye kuxigeenka Labaad
Kenya oo Taageersan mid kamid ah Musharixiinta Madaxweyne si uu ugu fududeeyo Ujeedooyin ay leedahay (Xog Rasmi ah)